FaceApp Iyo Barnaamijyada Kale Halista Ah Ee Ay Tahay Inaad Hadda Iska Tirto | Aayaha
Home»ARIMAHA BULSHADA»FaceApp Iyo Barnaamijyada Kale Halista Ah Ee Ay Tahay Inaad Hadda Iska Tirto
FaceApp Iyo Barnaamijyada Kale Halista Ah Ee Ay Tahay Inaad Hadda Iska Tirto
Aayaha editor Send an email July 20, 2019
Wararka shaacinaya halista ay leedahay isticmaalka FaceApp, ayaa kuwo isi soo taraya. Khubarada ayaa dadka uga digay isticmaalka barnaamijkaan maadaama uu xogahaaga u kashifi karo hackers-ka.
Marka laga soo tago barnaamijkaas, waxaa sidoo kale jiraan barnaamijyo kale oo aad u baahantahay inaad hadda iska tirtirto.
Barnaamijyadaas qaarkood ayaa si sahlan u urursan kara una soo bandhigi kara xogtaada. xaaladaha qaar waxay sidoo kale si qiyaano ah lacag ugala bixi karaan xisaabta Bankiga.
Waa kuwaan qaar kamid ah barnaamijyada aad u baahantahay inaad hadda iska tirtirto.
Barnaamijka lagu magacaabo Master cleaner ama barnaamijka nadiifiya taleefanka
Waa naxdin haddii barnaamijkaan uu taleefanka kuugu jiro. Waxaa la shaaciyay in barnaamijkaan uu urursan karo xogtaada isla markaana uu la wadaagi karo dadka xogaha jabsado.
Baarnaamijka Antivirus-ka oo aanan la garaneyn shirkadaha soo saaray
Qaar kamid ah barnaamijyadaan ayaa soo bandhiga xayeysiimo taasoo dadka isticmaala ku jiheysa ilo halis ah oo ah meel dadka wax jabsada ay ka heli karaan feeylasha muhiimka ah ee qofka taleefanka iskaleh.
Waxay dadkaas cadawga ah awood u yeelanayaan inay diraan, tirtiraan isla markaana ay ka jawaabaan farriimaha taasoo ka dhigan inay la wareegayaan nidaamka taleefanka adigoo aanan ogeyn. Kataxadar barnaamijyada noocaas ah.
Waa inaad sidoo kale iska tirtirtaa barnaamijkan. Steve Sammartino, ayaa caddeeyay in dambiilayaasha jabsada xogaha dadka ay wajigaaga u isticmaali karaan si ay u helaan aqoonsiyada Bankigaaga.
“Wajigaaga iminka waa qaab kamid ah copyright-ka oo aad u baahantahay inaad ka taxadarto qofka aad u ogolaaneyso inuu isticmaalo xogtaada joomarka.
Mustaqbalka markaan wajiyadeena wax u isticmaaleyno sida, lacagteena iyo kaararka bankiga kadib waxaan sameynay waxaa waaye inaan furayaasheena aan kuwa kale siinay,” ayuu yiri khabiir Tiknolojiyadeed.
Barnaamijyo kale oo ay kamidyihiin, super-boost cleaner, phone booster, free daily horoscope 2019, phone power booster, ayaa sidoo kale kamid ah barnaamijyada halista ah.
Talooyin Fudud Oo Ku Saabsan Kulanka Sariirta Oo Aad U Baahantahay Inaad Ogaato
Daawo :Barnaamij Lagu Wareystay Lamaanihii Guurkooda Loo Dilay Axmed Dowlo
Daawo Heesta Ha Ooynin & Gabdho Iyo Wiilal Oohin Afka Furtay
“Aniga oo 9 sano jir ah ayaa gabadha walalkay ka dhintay lagu qasbay inay i sugto”
Muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya akhriska iyo caafimaadka maskaxda?
3 Farsamo muhiim ah oo ay Aabeyaashu adeegsadaan si ay wiilashooda wax uga baraan nolosha
Why your commitment in the relationship can still make your partner cheat